IiWebhusayithi ezi-7 zokuKhuphela iiTemplate zePowerpoint eNkulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindawo eziGqibeleleyo zokuKhuphela iiTemplate zePowerpoint zangoku
Namhlanje sinezixhobo ezingapheliyo kwaye ngelixa kwiminyaka embalwa edlulileyo kwakunzima ukufikelela kwiitemplate ezikumgangatho ophezulu, Izinto zitshintshile ukuze ukuba siyayazi indlela yokukhangela sinokufumana ezinye zomgangatho ophezulu. Kungenxa yoko le nto siza kukubonisa uluhlu lweendawo onokuthi ukhuphele kuzo itemplate ukuze unike inqaku elikhethekileyo kwinkcazo-ntetho zakho.
Kwaye nangona ndithetha inyani UGoogle wenza ukuba kube nzima kwiMicrosoft, IPowerpoint iyaqhubeka nokukhokela iintetho ukuze nakwisicelo esinye, nangaphezulu kwisisombululo seMicrosoft 365, sibe neefayile ezandleni zethu esinokuthi sinike inqaku njengoko zinjalo kwimisitho yenkampani, iintlanganiso okanye iintetho kubathengi be Isidingo esinokubakho kukusebenza nathi okanye ukusebenzisa imveliso.
1 Iimpawu zeMicrosoft 365
3 Ingcaciso yamandla
5 Amakhadi okanye iZilayidi kwiFreepik
7 Izilayidi zomkhosi
Iimpawu zeMicrosoft 365
Njengakwi-Excel okanye iLizwi, kukodwa IMicrosoft isibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zetemplate ukuze singabinayo nemfuneko yokuba sikhuphele simahla kwezo nkcazo-ntetho. Kule ntlobo sinoluhlu olupheleleyo lweendidi eziya kusivumela ukuba sihambe ukusuka kwinto enokubonisa imveliso njengeprojekthi yedigri yokugqibela.
Ukusuka kwikhonkco elinikiweyo unokufumana iitemplate zePowerpoint zazo zonke iintlobo zokusebenzisa iialbham zezithombe, iileta zeendaba, iikhalenda, iileta, izatifikethi, ii-timescales, iimenyu, okanye iiposta. Olu luhlu lweetemplate zepremiyamu zinokusetyenziselwa ukunika ukubamba kwe-retro kwintetho yemveliso okanye ipowusta epheleleyo ye-infographic.
Microsoft Isibonisa ikhathalogu enkulu esingenakuphuthelwa yiyo Kwaye ukuba siyasixabisa isindululo sayo senkonzo yelifu kunye nazo zonke ii -apps esizisebenzelayo, i-9,99 ye- € XNUMX enokuthi ixabise ngenyanga, incitshiswe ngentlawulo yonyaka, inokuxabisa yonke idenariyo ye-euro.
Iisampulu zeMicrosoft - web
Con I-Slidesgo siya kwiitemplate ezimbini zomgangatho weprimiyamu yasimahla ngaphandle kwesidingo sokuba ubhalise. Ngapha koko sinokukhuphela ipotifoliyo yonke ngendlela yePowerpoint (njengomzekelo), ukuze ucinge ngomgangatho onikezelwa yile webhusayithi yeetemplate zePowerpoint zasimahla.
Ikwabonelela ngefayile ye- ukubanakho ukuzikhuphela kwizilayidi zikaGoogle Ngaphandle koko, sifuna ukukhetha iPowerpoint okanye asinakho ukufikelela kule nkqubo, kuba eyona nto isisombululo sikaGoogle kukuba isimahla, ukuba nje sineakhawunti kaGoogle. Ngokubhekisele kwiSlidesgo, yiwebhusayithi eboniswe kakuhle (ingenzeka njani enye into), apho siphezulu eSpeyin iindidi ezahlukeneyo ezivela kudumo, kwimfundo, kwishishini, kwintengiso, kunyango, kwiinjongo ezininzi kunye ne-infographics.
En nganye yeetemplate zamahala zePowerpoint zisinika isilayida Iitemplate ezinxulumene noko ukuze sikwazi ukufumana ezizodwa ezihamba kunye nemfuno yethu okanye umxholo kuyilo esifuna ukugxininisa kulo msebenzi okanye inkonzo enikiweyo. Singabhalisa simahla ukufikelela kukhuphelo lweetemplate ezingaphezulu.
Isilayidi - web
Siya phambi kwewebhusayithi ngesiNgesi, kodwa loo nto iyakusivumela ukuba sifikelele kwiimodeli ezininzi zePowerpoint ezikumgangatho ophezulu. Ukusuka kwiphepha ngalinye leetemplate siza kukhuphela ifayile ye-ZIP apho siza kufumana itemplate yePowerpoint ukuze siyisebenzise kamva.
Ngaphezulu sinefayile ye- imenyu ngeendidi zakho zokukhuphela itemplate ezinje ngeshishini, ubuncinci, ubungcali, imfundo, okwangoku okanye ubuchule bokuyila. Ngamnye kubo usisa kwiitemplate eziqokelelweyo kwaye xa sicofa kwenye siya kuba nalo lonke ulwazi, ngesiNgesi, ngenani lezilayidi, ubeko kunye nolwazi olunxulumene nomlungisi wemifanekiso yayo.
Ukuba oko usibhaptiza kwiphepha elineentengiso ezininzi, kodwa ukuba siyakwazi ukungazihoyi, siya kuba nakho ukonwabela iitemplate ezikumgangatho ophezulu zenkqubo yeMicrosoft. Ewe, ukuba ngesiNgesi asizukukhetha ngaphandle kokuguqula iitekisi zibe zezakho; into eya kwenzeka kwakhona ukuba siyazikhuphela ngeSpanish. Enye yezinto ezigqwesileyo zale ndawo kukuba, nangona besicebisa ukuba sibhalise, akukho mfuneko yokuba sishiye i-imeyile sisebenzise ezi templates zomgangatho.
Ingcaciso yamandla - Ukukhuphela simahla
Apha, kwaye ngokungafaniyo ezimbini ezidlulileyo, ewe oko kufuneka sibhalise ukufikelela Kwiitemplate zokubonisa zePowerpoint. Oku kukwathetha ukuba siyakonwabela iitemplate ezikumgangatho ophezulu kuwo onke amacandelo ukufumana eyona siyifunayo kwiprojekthi okanye ekusebenzeni eyunivesithi.
Ewe ngesiNgesi, kodwa oko akuthethi ukuba ngesakhono esincinci sinokuzikhuphelela itemplate ezikumgangatho ophezulu. Ngaphezulu sinemenyu yesiNgesi esisa kuyo Imizobo yePowerpoint, iiMephu, iiMilo zePowerpoint okanye iifom, ukuCwangciswa iitemplate zesicwangciso seshishini, Idatha kunye neTshathi yeDatha kunye neegrafu kunye neTekisi kunye neeTafile zeetafile kunye nokubhaliweyo. Ayisiyo yokuba ifuna ukuguqulelwa, kodwa injongo kunye neenjongo zayo inokuqondwa ngokugqibeleleyo.
Xa sele sibhalisile kwaye singene, singena kwifayile ye- ulwazi olufunekayo ukuze wazi nesikimu sombala wentetho okanye ubungakanani besilayidi ngasinye. Iwebhsayithi enobungcali ebeka yonke into esiyifunayo ukuze sikwazi ukuvavanya ngokukhawuleza ngaphambi kokukhuphela iitemplate esinazo kwaye zininzi zazo.
Amakhadi okanye iZilayidi kwiFreepik
Freepik Isenye yezona ndawo zikhutshelweyo zokukhuphela Zonke iintlobo zemizobo, iifayile okanye izinto ezinento yokwenza nemfuno yokuyilwa kwemizobo kuwo onke amanqanaba. Ewe kunjalo, inamakhadi okanye izilayidi ezisivumela ukuba sizisebenzise ukongeza kamva iPowerpoint entsha.
Ukusuka kwikhonkco esilibonelela ngezantsi Fumana iintlobo ezahlukeneyo zezilayidi onokuyisebenzisa kula maxwebhu ayiliweyo. Zikhathalogu yezilayidi onokuzisebenzisa kuwo onke loo makhadi enza intetho oyifunayo. Ewe kunjalo sinezazo simahla, nangona singena kwi-Freepik yenyanga yokubhaliselwa siya kuba nakho ukufikelela kwinxalenye yepremiyamu apho umgangatho wezilayidi uphucuka kakhulu.
Ngaphezulu kwako konke sinika izimvo kuba ukuba sifuna into eyahlukileyo ngakumbi, kwaye ayisiyiyo eyokukhutshelwa ngamawaka anjengathi ehlabathini lonke, inxenye yepremiyamu inokuba ngumdla ngokweemfuno zethu. Ewe, ukuba sinobhaliso kwiFreepik singayisebenzisa kwiimpawu, ii-icon, imizekeliso, iivektri nokunye.
Izilayidi zeFreepik - Ukukhuphela
Okunye Indawo yesiNgesi yazo zonke iintlobo zeetemplate zokubonisa kwaye oko kuphawuleka ngokusibonisa nakwingaphambili okanye i-thumbnail yetemplate inani lezilayidi eziqulathiweyo. Ewe kuya kufuneka ubhalise ukukhuphela ikhathalogu yayo yonke njengenye indlela enomdla yokuhlala unazo kwaye ujonge iitemplate ezintsha.
Onke la macandelo ahlelwe kwiphaneli esecaleni kunokwenzeka ukubonelelwa ngama-24Slides. Sinokubhalisa kwiakhawunti yethu kaGoogle ukufikelela kwikhathalogu yakho ukusukela ngoku.
Ukutyibilika - Kwiwebhu
Y Sigqibe ngewebhusayithi ngeSpanish yokukhuphela iitemplate esemgangathweni yeprimiyamu. Kukwiqondo lomgangatho kunye namava uSlidesgo, ke kwiphepha eliphambili sinokubona zonke iindidi ezikhoyo ngokweemfuno zethu. Sinokukhangela iitemplate ngombala okanye siye kwezi "ziphakamileyo" iindidi ezinje ngokukhuthaza, ukuyila, elula, ukuqala okanye ishishini. Indlela emnandi kunye eyonwabisayo yokubachonga ukuze sikhawuleze siye kwezi zinomdla kuthi.
Kule ndawo sinefayile ye- ezahlukeneyo zeetemplate zePowerpoint Kwaye ukuba ufuna ukuhlala usesikhathini kunye nezinto ezintsha ezizayo, ungarhuma kwincwadana yabo ukuba ibe yeyokuqala ukukhuphela enye.
Njengabanye, isinika ulwazi olunomdla njengenani lezilayidi, inani leempawu esinokuzilungisa esinazo okanye ifomathi esetyenzisiweyo yokwazi ukuba singadubula ngomnye we-4: 3 okanye 16: 9. Kuya kufuneka siphawule ukuba iitemplate ozikhuphelayo zinokusetyenziswa kwiiPapasho zikaGoogle, ke eyona nto ibaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukutsala enye okanye enye inkqubo njengoko sinomdla.
Un iwebhusayithi elula esivumela ukuba sibe nazo zonke iintlobo zemixholo kunye neetemplate zale mihla zokubonisa ukuba singobungcali kangakanani okanye ukuphakama kwendlela yethu ethile yokubonelela ngesindululo sexabiso. Ukuthi ngeSpanish kuyinika indawo ukuze singachithi ixesha elininzi kunye nabaguquleli.
Izilayidi zomkhosi - Kwiwebhu
Le yile Iindawo eziGqibeleleyo zokuKhuphela iiTemplate zePowerpoint, kwaye basebenzela iZilayidi zikaGoogle. Ngoku ukubalungisa ukuze balungiselele loo msebenzi okanye iphothifoliyo apho ungabonisa khona zonke izakhono kunye neempawu zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Iindawo eziGqibeleleyo zokuKhuphela iiTemplate zePowerpoint zangoku
Qalisa kwakhona iitemplate zokukhuphela kwaye uziveze ngendlela engazange ibonwe kwinqanaba lobuchule
I-Adobe Premiere ihlaziywa ngo 'Kuthunyelwa ngaphandle kwangoko' ngohlaziyo lukaNovemba